2D,3D Tutorial Website - MYSTERY ZILLION
မူလ › Graphic › Maya ဝင်ရောက်ရန် · အဖွဲ့ဝင်ခြင်း မင်္ဂလာပါ!
2D,3D Tutorial Website
thurizz January 2009 edited October 2009 in Maya ကျနော် Reference လုပ်တဲ့ WEBSITE တွေပါ။ 2D, 3D ကိုစိတ်၀င်စားကြတဲ့ CG သူငယ်ချင်းတို့အတွက် အသုံး၀င်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။.....:):6:http://www.my3dtutorials.com/ http://www.highend3d.com/ http://www.tutorialsxtras.com/ http://www.tirad.com/ http://www.tutorialhero.com/ http://area.autodesk.com/ http://www.simplymaya.com/ http://www.3dmd.net/ http://www.digitaltutors.com/:):) မှတ်ချက်များ
ayeminn January 2009 edited January 2009 Registered Users ရှဲ...ရှဲ .. ကိုသူရဇ် ..:41::113::113: ayeminn January 2009 edited January 2009 Registered Users ....ကျွန်တော်....အကိုတင်ပေး ထားတဲ့ website တွေကို....လေ့လာနေပါတယ်......အခုလို....အကိုသိတာတွေကို...ေ၀မျှပေးတဲ့အတွက်...ကျေးဇူးတင်ပါတယ်......နောက်လဲ....အခုလို....မျိုုုးထပ်တင်ပေးပါ.... http://www.learning-maya.com/အခု website ကတော့..MAYA ကိုစတင်လေ့လာမဲ့သူတွေအတွက်. အ ကျိုးရှိမယ်လိုတော့....မျှော်လင့်ပါတယ်....:6::67: thurizz January 2009 edited January 2009 ကျေးဇူး..ကိုအေးမင်း...ကျနော်လဲ .. Maya ..ကိုလေ့လာနေစဲပါ၊...:D:65: naungnaung October 2009 edited October 2009 Registered Users maya ဆိုတာ ဘယ်လိုဟာမျိုးလည်း Cartoon တွေလုပ်တဲ့ software လားgame တွေကောလုပ်လို့ရ လားဆိုတာ ကိုသိချင်ပါတယ်။ khinegood October 2009 edited October 2009 Registered Users ကျေးဇူးပါ ကိုthurizzhttp://www.cgarena.com/ ဒီဟာလေးလဲ ကောင်းပါတယ် Sign In or Register to comment. Powered by Vanilla